होसियार, तपाईको यस्ताे आनीबानीले पनि थाहा पाउन सकिन्छ , खराब कि असल व्यक्तित्व ? – Medianp
होसियार, तपाईको यस्ताे आनीबानीले पनि थाहा पाउन सकिन्छ , खराब कि असल व्यक्तित्व ?
Media NPप्रकाशित मिति: बुधबार, चैत २७, २०७५११:५१
काठमाडौ । प्राय मानिसहरु बाहिर हिड्दा वा घर परिवारमा रहदा विशेष गरी मानिसहरुको अनुहार , लुगाफाटो र शारिरिक हाउभाउलाई मात्र हेर्ने गर्दछन् । किनभने धेरै मानिसहरुको पहिचान त्यही बाहिरी भौतिक चिजहरुमा मात्र रहेको हुन्छ । त्यसैले पुरुषहरुको तुलनामा महिलाहरु बाहिर निस्कदा आफ्नो मेकअप मिल्यो मिलेन् , कपाल कस्तो भयो जस्ता कुराहरु ऐनामा हेर्ने गर्दछन् । तर कसैले पनि आफ्नो भित्री मनलाई वा आनीबानी कस्तो छ भनेर हेदैनन् । त्यसैले आज हामी तपाईलाई प्रश्न गदैछौ , के तपाईको भित्री आनीबानी सही छ ?जाच्नुस्
आफ्नो आनीबानी कस्तो छ ?
प्राय मानिसहरुले आफ्नो आनीबानी कस्तो छ भनेर मूल्याकंन गरेका हुदैनन् । यदि कसैले मूल्याकंन गरिहाले पनि खराब बानी भए लुकाएर ,ढाकछोप गरेर आफुलाई असल बनाउने प्रयास गर्छन् । तर कसैले पनि सोच्दैनन् , आफ्नो आनीबानीले कही अरुलाई अप्ठेरो परेको छ कि ?एक चोटी सोच्नुस् त !
तर यो संसारमा जति पनि मान्छेहरु रहेका छन् । हरेक मानिसहरुको आनीबानी फरक फरक हुन्छ । हामी सबै जना ३२ लक्षणले नै युक्त हुदैनौ । तर पनि मानिसहरुले तपाईको बाहिरी हाउभाउ भन्दा पनि आनीबानीलाई नियालिरहेका हुन्छन् ।
आफ्नो आनीबानी एकचोटि आफै जाँच्नुस् त ?
यदि वास्तवमै तपाई असल आनीबानी भएको मानिस हो भने जसरी तपाई ऐना अगाडि उभिएर आफ्नो बाहिरी आवरणलाई मूल्याकंन गर्नुहुन्छ , त्यसरी नै आफ्नो आनीबानीलाई नियाल्नुपर्छ ।
त्यस्तै अर्को कुरा तपाईको सोच र व्यवहारले थाहा पाउन सकिन्छ । जस्तै सार्वजनिक स्थानमा यदि तपाईको चुरोट खाने बानी छ भने तपाईको त्यो व्यवहारले नै थाहा हुन्छ । यसले चुरोट खादो रहेछ भनेर । त्यसपछि तपाईले सार्वजनिक स्थानमा चुरोट खादाँ अरुलाई कति असर पयो कि भनेर कहिल्यै सोच्नुभयो ? यो व्यवहारले थाहा पाउनछन् तपाई असल मान्छे होइन् ।
अर्को कुरा यदि तपाई कुनै सार्वजनिक यातायातमा चढ्नुभएको छ, त्यहाँ भिडभाडमा धकेल्नुहुन्छ , उछिन्नुहुन्छ , असजिलो महसुस गर्नुहुन्छ वा आरक्षण गरिएको सिटमा बस्नुहुन्छ , वा उनीहरुलाई सिट छोडी दिनुहुन्छ भने त्यहाँबाट पनि तपाई कस्तो व्यक्ति भनेर मूल्याकंन गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै अर्को कुरा यदि तपाईको अगाडि कोही अपरिचित युवतीहरु हिडिराखेका छन् , त्यहाँ उनीहरुलाई घुरेर हेर्नुहुन्छ वा कस्तो व्यवहार देखाउनुहुन्छ , त्यहाँ बाट पनि तपाईको मूल्याकंन हुन्छ । त्यसैगरी तपाई गर्ने सानो कुरा होस् वा सोचाइले पनि तपाईको प्रवृति थाहा पाउन सकिन्छ । त्यसैले यदि तपाईको आनीबानी जाँच गर्दा खराब व्यवहार रहेछ भने आजैबाट हटाउनुस् । खराब प्रवृत्तिले हामीलाई भित्रैदेखि कुरुप देखाउँछ ।
‘छ माया छपक्कै’ चलचित्रमा मा दीपकराज, जितु नेपाल र केदार घिमिरे माग्नेबुढा खेल्दै
प्रहरी लगाएर वीर अस्पतालमा ओपीडीको टिकट काटियो, डाक्टरले भने, प्रहरीलाई नै जँचाउन लगाउनुस् अब